सूचना-प्रविधी | Saurahaonline.com - Part 7
के सर्पले सम्मोहित गर्छ ? २०७६, १ असार आईतवार
धेरै मानिसहरु सर्पसँग डराउँछन् । यसरी सर्पसँग डराउनु स्वभाविक नै पनि हो । किनभने, कतिपय सर्पहरु यति विषालु हुन्छन् कि तिनीहरुले टोकेपछि तत्काल उपचार नपाए मानिस ठहरै हुन सक्छ । तर सर्पसँग मान्छेको डर यसको विषको कारणमा मात्रै सीमित छैन । सर्पका..
शिवपुरी, १ असार । नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ३ वटा केबलकार र रिसोर्टसहितका नाफामुलक परियोजनाका लागि व्यवसायीले लबिइङ तीब्र पारेका छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जगडोलस्थित सहिदपार्कदेखि शिवपुरी निकुञ्जको मुलाबारी, बूढानिलकण्ठदेखि..
रत्ननगर नगरपालिकाद्धारा ध्वनि सूचना पाटी सुरू २०७६, ३० जेष्ठ बिहीबार
चितवन ३० जेठ । रत्ननगर नगरपालिकाले ध्वनि सूचना पाटी (अडियो नोटिस बोर्ड) सुरू गरेको छ । सूचना प्रबिधि मार्फत विद्युतिय सुशासन कायम गर्न रत्ननगर नगरपालिकाले अडियो नोटिस बोड सेवा सुचारु गरेको छ| नगरपालिकालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने..
नेपालको स्याटेलाइट राख्ने अन्तरीक्षमा विवाद
काठमाडौं, ३० जेठ । नेपाल र फ्रान्सबीच आज (बिहीबार) हुने भनिएको स्याटेलाइट खरिद सम्झौता अन्तिम समयसम्म आएर अनिश्चित बनेको छ । सञ्चार मन्त्रालयको उच्च स्रोतको भनाइमा आज सम्झौता हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली..
फेसबुकलाई डाटा बेचेर यो एपमार्फत कमाउनुहोस् पैसा
एजेन्सी । अब इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरुले फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्ने भएका छन् । प्रयोगकर्ताहरुबाट डाटा खरिद गर्ने उद्देश्यका साथ फेसबुकले ‘स्टडी’ नामको नयाँ एप ल्याएको छ । फेसबुकले बजार अध्ययन गर्नका लागि उक्त एप ल्याएको हो । प्रयोगकर्ताले..
रातोपाटी र ओम शर्मा टिमलाई बधाई २०७६, २७ जेष्ठ सोमबार
काठमाडौं, २७ जेठ । सहकर्मी डिजिटल पत्रिका www.ratopati.com (रातोपाटी डटकम) आज सातौँ वर्ष प्रवेश गरेको छ । यो अवसरमा यसका संस्थापक ओम शर्मासहित रातोपाटी परिवारलाई बधाई ज्ञापन गर्दछौँ । अनलाइन पत्रकारिताको एक दशक अभ्यासमा रातोपाटी वामनजरबाट समाजवाद..
हुवावे माथी अर्को धक्का, अब बन्ने फोनमा फेसबुक नचल्ने
काठमाडौँ, २७ जेठ । अमेरिकी पार्टपुर्जा र सप्टवेयर खरिदमा प्रतिबन्ध झेलिरहेको चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेमाथि अर्को धक्का लागेको छ । अमेरिकी कम्पनी फेसबुकको पनि हुवावेका नयाँ स्मार्टफोनमा आफ्ना एप्सको प्रि–इन्स्टलेसन नदिने जनाएको छ..
फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन कसरी रहन गयो ? २०७६, २४ जेष्ठ शुक्रबार
एजेन्सी– हामी जब फोन उठाउछौँ बित्तिकै पहिलो शब्द हुन्छ हेल्लो त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर..
१ सय २४ स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गरिने २०७६, २३ जेष्ठ बिहीबार
काठमाण्डौं, २३ जेठ । देशभरका १ सय २४ स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना हुने भएको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणले सूचना प्रविधिको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहहरुमा उक्त कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो । सो कार्यक्रम संचालनको लागी ग्रामिण..
इन्टरनेटको गति परीक्षण गर्ने प्रणाली जडान गर्दै दूरसञ्चार
काठमाडौँ, जेठ २३ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट ब्यान्डविथको निरीक्षण प्रणाली जडान गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ परीक्षणको प्रणाली जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले..
महोत्तरी । प्रहरी चौकी कटुधारका इन्चार्ज असई व्रिजेश कुमार चौधरी नगद १३ हजार घुस रकमसहित बिहीबार रंगेहात पक्राउ.....
भरतपुरमा एक कैदीको मृत्यु